Ungazifumana njani izimvo zeTik Tok - Isikhokelo soLwazi - Winches Club
Ukufumana izimvo zikaTik Tok kulula kakhulu kunokuba ucinga, kwaye zininzi iindlela zokwenza.. Makhe sijonge iindlela ngeendlela zokuqokelela uphononongo lweTik Tok kunye nokuchonga ezona ndlela zokunyusa uphononongo lwakho lweTik Tok.
Funda & agrave; Yazi abaphulaphuli bakho
Enye yezona zinto zaziwayo nezisezicacileyo abanye abadali abazithathela lula ngabaphulaphuli babo.. Abaphulaphuli bakho basentliziyweni yendawo yokujonga kunye nokubandakanyeka oya kukufumana. iakhawunti yakho. Kubalulekile ke ngoko ukuba okungenani uziqhelanise nabaphulaphuli bakho ukuze ube nakho ukuhlengahlengisa umxholo wakho kunye ne-agrave; okulindelekileyo & agrave; jonga kwisitishi sakho seTik Tok. Akunyanzelekanga ukuba kubenzima ukwazi abaphulaphuli bakho. Zininzi izinto onokuzenza ukuze ubazi ngakumbi abaphulaphuli bakho. Enye yeendlela ezilungileyo zokwenza oku kukuqhuba iivoti ezikwi-Intanethi kunye nevoti. Banokukunika isalathiso esingcono somgangatho. yokufumana umxholo wakho kunye nokufuna ukutshintsha; & agrave; ikamva lokwenza umxholo ubenomtsalane kubabukeli behlabathi ngokubanzi.
Ukongeza kuphando oluthatha inxaxheba kunye ne-Q & A kunye nabalandeli bakho, Uhlalutyo lweTik Tok yenye indlela elungileyo yokuvavanya intsebenzo yakho iyonke. Ukuvavanya intsebenzo yakho iyonke kubalulekile, kuba ukuba awuyenzi, iakhawunti yakho isenokungabi nomtsalane kwaye isenokungabi nabantu abaninzi abanxibelelana nayo kwixa elizayo.
Isithuba sabelwe nguTikTok (@kweenkanye) ivuliwe Jul 7, 2020 at 12:00pm PDT
Fumana iMibono eNtsha yoMxholo
Ukongeza ekwazini abaphulaphuli bakho, kukwabalulekile ukuza nezimvo zomxholo omtsha. Ukufumana umxholo wemibono yindlela elungileyo yokwenza ijelo lakho leTik Tok lisebenze ngakumbi kwaye, ngoko ke, ukukhuthaza abantu & agrave; Yityelele. Kuyimfuneko ukuba ukhumbule ukuba xa ukhangela umxholo wemibono emitsha, akufuneki ukope enye ngokuthe ngqo. Zama ukwenza umxholo wakho ngokusekwe kwintsholongwane okanye kwiskit, ngendlela & agrave; sukufaka nje & agrave; ubunzima babanye abantu bethumela umxholo ofanayo ojolise kwizinto ezihamba phambili okanye kwintsholongwane. Ukurisayikilisha okanye ukukopa umxholo kungakhokelela ekuvalweni okanye ekunciphiseni iakhawunti yakho ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile ukuba kumiselwe ukuba umxholo wakho awuyiyo eyokuqala
Xa u ukukhangela inkuthazo yemixholo emitsha yomxholo, kutheni ungathethi ngayo & agrave; abahlobo bakho ? Abahlobo bakho banokuba ngumthombo omkhulu wokhuthazo okanye ulwazi ukuba ufuna i & agrave; yenza i-Tik Tok enomdla nenomdla. Ngaphezu koko, zama ukukhangela amanye amajelo eendaba ezentlalo. Ngaphandle koko, Ukuhlalutya eminye imithombo yeendaba kwezentlalo kuya kukunika ukujonga ngcono ukuba loluphi uhlobo lomxholo onokufuna ukuwenza kungekudala kwaye kufuneka upapashwe njani;. Ukufumana imixholo emitsha yabantu abaninzi kwiTik Tok yenye yezona ndawo zinzima zenkqubo.. Kungenxa yokuba baninzi abantu abasebenzisa iapps kunokuba nzima ukuba babonakale kwaye babeyintsusa ngokukhawuleza, ubuncinci hayi & agrave; isikali esikhulu.
I-Tik Tok liqonga elinika umngeni kubasebenzisi balo ukuba benze umxholo omtsha kunye nokubandakanya izibonelelo uluntu. Ukuba ucwangcisa ukwenza umxholo wakho, Ukuyibhala phantsi kwaye uyibhale phantsi yindlela elungileyo yokugcina izimvo zakho kwaye ubhale phantsi ephepheni. Oku kukunika ithuba elingcono kakhulu lokudala umxholo wokuzibandakanya.
Hlala unolwazi & oacute;
Enye yeendlela ezilungileyo, uninzi luhambelana kwaye lusebenza kakuhle, Ukufumana uninzi lwezimvo kwiTik Tok kukwazi iqonga lakho. Kungabalulekile ukuba uhlale unolwazi ngeendaba zamva nje kunye nohlaziyo. usuku, ngakumbi ukuba kwenziwe utshintsho olubalulekileyo usetyenziso okanye ukuba utshintsho lunokuchaphazela iakhawunti yakho. Kubalulekile ukulandela iTik Tok kunye nokubheja konke & agrave; Usuku awafumana ngalo, kuba oku kukuqinisekisa ngokubheja & agrave; imihla eqhelekileyo. Ukuba awuhlali uhlaziyiwe & agrave; imini kunye nabadali, Ungabona ukunxibelelana okuncinci kwiakhawunti yakho yeTik Tok. Oku kungakhokelela ekukhuleni okuncinci phakathi kwezinye izohlwayo ukuba awuzilandeli izikhokelo zeTik Tok.
Zininzi iindlela zokuhlala unolwazi. kunye neTik Tok. Enye yeendlela ezilula nezitya ixesha elininzi kukubhalisela i-agrave; incwadana yeendaba. Incwadana yeendaba inezinto zokuthengisa kunye neendaba kunye nohlaziyo. usuku olunqabileyo… Ngaphandle koko, Oku kukuvumela ukuba uqonde ngcono ukuba iTik Tok itsala njani abantu abaninzi minyaka le. Ukongeza kukuhlala unolwazi ngemisebenzi yeTik Tok, Unokuthathela ingqalelo ukuba uzenzele udumo kwiTik Tok. Emveni kwakho konke, iinkwenkwezi zeendaba zentlalo kwiTik Tok eyenziwe ingeniso elungileyo enkosi kule & agrave; intengiso kunye nenkxaso emva kokuvula iakhawunti okanye iiakhawunti ezaneleyo, okanye emva kokuba enye yeevidiyo zabo iye yangena kwintsholongwane.
Isithuba sabelwe nguTikTok (@kweenkanye) ivuliwe Mar 6, 2020 at 3:00pm PST
Yenza iiVidiyo zokuFundisa ezizodwa
Ukwenza iividiyo zokuqala zoqeqesho kubaluleke kakhulu. Kanjalo, ividiyo efundisayo kunokwenzeka ukuba inike umphumo onomdla kwaye yenze yonke into ifikeleleke kuwe. konke. Xa ucinga ngeevidiyo phumelela, & agrave; ixesha langoku, utyelelo olunolwazi lunqabile. Oku kugqityiwe; inyani yokuba uninzi lweevidiyo kwiTik Tok zisekwe kumculo wevidiyo ezihlanganisiweyo. Nangona kunjalo, iinkcukacha-manani zesicelo zibonisa ngakumbi ukuba umsebenzisi uliqela labantu.
Umzekelo wevidiyo eyahlukileyo yemfundo onokuyivelisa wenza indlela-yokukhokela kumdlalo wevidiyo. Umzekelo, Ungabonisa into ekhethekileyo kumdlalo imizuzwana embalwa. Yindlela entle yokwenza ukuba abantu babe nomdla kumxholo wakho kunye nento esasazwayo. kwisitishi sakho ngokubanzi.
Ekugqibeleni, malunga nomxholo weTik Tok, Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba abantu bafuna ukukhawuleza, ukubandakanya umxholo obafundisa into ethile okanye ixabiso lokuzonwabisa. Ukuzonwabisa yenye yeendlela ezintle zokutyebisa umxholo weTik Tok yakho, nangona besitshilo, Kuya kufuneka uqaphele ukuba iividiyo ezinolwazi kunye nomxholo ziyindlela elungileyo yokufumana umbono ngakumbi kwiTik Tok, kuba le yindawo engakhange yenziwe ngokwenene. kuphononongwe ngabaphembeleli abaziwayo beTik Tok.
Yenza iividiyo zakho zihlekise
I-Tik Tok yindawo yokuzalwa yomxholo owahlukileyo, ehlekisayo kunye neemvakalelo. Kubalulekile ukuba uyiyeke kube kanye kwaye wenze ezinye iividiyo zakho zihlekise.. Akusoloko kuyimfuneko ukuba nesicwangciso esifanelekileyo sokwenza iividiyo zakho zihlekise. Zama ukongeza ezinye iincwadana ezimnandi kuyo. iividiyo zakho, kunye nomculo ofanelekileyo. Unokwenza isikethi esincinci okanye skit esidibanisa izinto ezahlukeneyo. izinto kunye nemibono. Ukuhlekisa akuthathi cinga kakhulu. Indlela ekhawulezayo yokwenza ividiyo ehlekisayo kukudlala iprank. umhlobo. Iipranks ezincinci kwiTik Tok zithandwa ikakhulu. Njengengcebiso zekhamera kunye nobuchule.
Thetha ngeTik Tok & agrave; abanye babahlobo bakho. Rhoqo, abantu banezimvo ezahlukileyo malunga neendidi ezahlukeneyo zeTik Tok kunye nento enokuthi ithathelwe ingqalelo njengenyaniso. njengokuhlekisa kwi-app. Kubalulekile ke ngoko ukuba uthethe ukuba kunokwenzeka & agrave; kwabanye abantu uyazi ukufumana ingxelo kunye nezimvo kwezinye zomxholo owuvelisayo kwaye nokuba ungathathelwa ingqalelo njengehlekisayo okanye hayi.
Ngamaxesha athile, ezinye zevidiyo ezihlekisayo ezenziwe qala kwimixholo elula nesisiseko. Ke ngoko, ucwangciso oluncinci kunye nobuchule ingakunceda & agrave; ukuvelisa uninzi lweembono kunye notshintshiselwano kwiTik Tok. Xa ukhangela i & agrave; yenza iividiyo zakho zonwabe, Kubalulekile ukuba wazi ukuba ngabaphi abaphulaphuli ojolise kubo, kuba ukwazi abaphulaphuli bakho kuthetha ukuba unokujolisa kumacandelo athile.
Article suivantUkuthenga kwe-IGTV ngoku kuyafumaneka kwi-Instagram